Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-anemone yolwandle | Ngeentlanzi
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-anemone yolwandle
Namhlanje sihamba siye kwiilwandlekazi nakwiilwandlekazi ukuze sichaze ngokupheleleyo esinye sezona zilwanyana zasemanzini zingenamqolo. Inxulumene ne-jellyfish kunye nokuhlelwa komphetho ofanayo, sithetha ngawo anemone. Yeyiklasi yeAnthozoa kwaye babelana ngendalo kunye neekorale. Ngokungafaniyo ne-jellyfish eqhelekileyo, i-anemone inesigaba esinye kuphela se-polyp kwaye zizilwanyana ezizimeleyo. Igama layo lenzululwazi ngu Izinto zokwenza.
Ngaba uyafuna ukwazi zonke iifayile ze- ibhayoloji kunye nendlela yokuphila yolu hlobo? Kufuneka uqhubeke ufunda 🙂
1 Iimpawu kunye nenkcazo ye-anemone
2 Ityhefu ekulungeni
Iimpawu kunye nenkcazo ye-anemone
Ezi zilwanyana ezingenamqolo Banolingano olujikelezayo kunye nomzimba wabo ukwakheke okweesilinda. Ngokuqhelekileyo zibambelele kumzantsi wesanti elwandle. Singazifumana ematyeni okanye nakwiigobolondo zezilwanyana ezingenamqolo. Zincamathele kumphezulu wenkosi kulwakhiwo olubizwa ngokuba yiped disc.
Esinye sezinto ezikhethekileyo zokuziva kwesi silwanyana kukuba sinomngxunya omnye wokutshintshiselana nomphakathi. Oko kukuthi, ngokungathi umlomo wethu uphiwe ukutya kunye nokuzikhupha ngaxeshanye. Oku kunokuvakala kuyinto encinci, kodwa esi silwanyana siphila ngoluhlobo ngonaphakade. Ibizwa ngokuba yidiski yomlomo kwaye ikwindawo ephezulu. Ijikelezwe luthotho lweethente ezilungiselelwe kunye nemisesane yokugxila.
Ngokungafaniyo uninzi lwezilwanyana, i-anemone ayinamalungu akhethekileyo okwenza imisebenzi eyahlukeneyo. Ngaphandle koku, elona candelo lomzimba wakho linomqolo wesisu, nangona ingelo lungu lokwenyani, uninzi lwemisebenzi yesondlo iyenziwa. Kunokuthiwa unoxanduva lokuphefumla nokondla.
Ngokubhekisele kwinkqubo yayo yemithambo-luvo, iyinto yakudala kwaye ayinayo nayiphi na into esembindini. Luxanduva lokuqokelela ulwazi malunga nezinto ezithile ezikwimeko yokomzimba kunye nokugcina i-homeostasis.
Njenge-jellyfish yayo, i-anemone ineeseli ezihlabayo ezibizwa ngokuba ziicnidocytes. Ezi seli zifunyanwa ikakhulu kwinxalenye yeetende. Kukho izilwanyana zomphetho ezihlelwe kuwo wonke umzimba. Iiseli zifumana la mandla anetyhefu enkosi ii-neurotoxins ezinokukhubaza ezinye izilwanyana ngokuchukumisa ngokulula.
Esi sixhobo sisebenza kokubini ukuzikhusela kumarhamncwa anokubakho nokuzinceda ekuzingeleni. Ndiyabulela kule tyhefu banokuthi bakhubaze amaxhoba abo ukuze bawangenise ngokukhawuleza.
Kuba i-anemone sisilwanyana esingaqhelekanga esingenamqolo iye yaqhelana neemeko ezininzi. Zifumaneka phantse kuzo zonke iilwandle kunye neelwandle zehlabathi. Nokuba uya kwiindawo ezinobude obugqithisileyo apho amaqondo obushushu asezantsi, uya kufumana i-anemones. Nangona kunjalo, eyona ndawo iphakamileyo ibonwa kwiindawo ezifudumeleyo kunye neendawo ezishushu.
Ngokuphathelele indawo yayo yokuhlala, ihlala ihleli inokufumaneka emazantsi olwandle, kuba izinto eziphilayo benthic. Ezona ndawo ziluncedo zixhomekeke kuhlobo ngalunye. Abanye bayakwazi ukuhlala kwiindawo ezinzulu kwaye abanye abanako. Olu hlobo lokuhlala luhambelana nenkqubo yokuziqhelanisa nobungakanani besiganeko kwimitha yelanga.
Xa i-anemone iguqulela kwimeko-bume, iyazibophelela kwi-substrate kwaye ihlala apho. Ngokuqhelekileyo abazidingi iimfuno ezininzi ukuze baphile. Uninzi lwazo luhlala kunye nezinye ii-anthozoans ezinje ngeekorale. Indawo yayo yindawo engqongwe ngamatye ekorale. Zombini ziphumelele kolo lwalamano, ke sisifo sokuhlangana.
Omnye wemizekelo ecacileyo yokuqonda olu hlobo lobudlelwane kukuhlalutya i-anemone nayo I-clown fish. Ezi ntlanzi ziye zavela ngendlela yokuba zikhuseleke ngokupheleleyo kwii-neurotoxin ze-anemones. Ezi ntlanzi zingazikhusela kwezinye izilwanyana ngokuzifihla phakathi kweentente kunye nokusebenzisa ityhefu. Kwelinye icala, isenzo sale ntlanzi sigcina iintambo ze-anemone kunye nediski yomlomo icocekile ngalo lonke ixesha.
Olunye ubudlelwane be-symbiotic busekiwe kunye ne-photosynthetic algae evelisa ioksijini kunye nezinto eziphilayo eziya kudliwa sisilwanyana, ngelixa ulwelwe lusebenzisa ithuba le-metabolites yenkunkuma eveliswa sisilwanyana.
Uninzi lokutya lusekwe bamba ixhoba labo liphila ngeentente. Phantse kuzo zonke iimeko zizilwanyana ezincinci ezinjengeemollusk, iintlanzi zosana kunye nezinye iicnidarians.
Ngombulelo kwiintente ezinokuthi zingenise ukutya emlonyeni wazo kwaye zikudlulisele kwisisu sesisu. Ukwetyisa kwenzeka kule ndawo.
Ukuzaliswa kwabo kwakhona kunokuba ngokwesini kunye ne-asexual. Ukuzaliswa kwakhona ngokwesondo kunokuba kukuhluma okanye ukufakwa kwebhanari. Oku malunga nokwahlula umzimba wakho. Kwezinye iintlobo, inkqubo ebizwa ngokuba yi-pedal laceration inokwenziwa. Oku kwenzeka kwinxalenye yediski enyovwayo apho iziqwenga ezininzi zahlulwe zanikezela abantu abatsha.
Kwelinye icala, ukuveliswa ngokwesondo kuxhomekeke kuhlobo oluthile. Singafumana amachweba ahlukeneyo ngokwesini kunye nezinye zii-hermaphrodites. Kuzo zombini iimeko inkqubo iqala ngamadoda. Ngabo bagcina isidoda kwindawo esingqongileyo apho bakhoyo. Oku kubangela ukuba iiseli zokuzala zowasetyhini zikhuthazwe. Kulapho i-ovules ikhutshelwa khona ngaphandle kwaye ukuchumisa kwangaphandle kwenzeka.
Ngenxa yoko, kwenziwa umbungu wezithole onesakhono sokuqubha. Nangona kunjalo, njengoko bechitha iintsuku ezininzi zobomi basimahla, bagqibela ngokulungisa kwi-substrate kunye nokuphuhlisa i-polyp eya kuthi ibangele i-anemone entsha. Enkosi kwezi ntsuku apho simahla, indawo yokuhambisa inokwanda. Kuxhomekeka kwimisinga nakwiindawo apho inokusekwa ngempumelelo.
Ezi zilwanyana ziye zithandwa kakhulu njengezinto zokuhombisa kwii-aquariums. Ngenxa yoko, ukubanjwa ngokungakhethiyo kwe-anemone kuye kwanda kwaye kubeka iindidi emngciphekweni wokuphela. Oku kwenziwa kuba zilungele ezo tanki zine-clownfish.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukufunda ngakumbi ngesi silwanyana solwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-anemone yolwandle
Ibhayoloji kunye nendlela yokuphila yabacwangcisi